Hubinta transistor -ka: talaabo talaabo loo sharaxay iyo hab fudud | Qalab bilaash ah
Isaac | 23/09/2021 09:00 | Qaybaha elektarooniga ah
Waqti ka hor waxaan daabacnay cashar ku saabsan sida aad awooddo hubi capacitors. Hadda waa mar kale qaybta elektarooniga ah ee muhiimka ah, sidee tani tahay. Halkan waxaad ka arki kartaa sida hubi transistor si fudud loo sharxay oo talaabo talaabo ah, waxaadna ku samayn kartaa aaladaha sida caadiga ah sida multimeter -ka oo kale.
ka transistors ayaa si weyn loo isticmaalaa in badan oo ah wareegyada elektiroonigga ah iyo korantada si loogu xakameeyo aaladdan adag ee gobolka. Sidaa darteed, marka la eego sida ay u badan yihiin, hubaal waxaad la kulmi doontaa kiisas ay tahay inaad iska hubiso ...
1 Maxaan u baahanahay
2 Tallaabooyinka lagu hubiyo transistor -ka laba -cirifoodka
2.1 Transistor -ka FET
Maxaan u baahanahay
Haddii aad hore u lahayd multimeter wanaagsan, ama multimeter, taasi waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u tijaabiso transistor -kaaga. Haa, tan Multimeter waa inay lahaataa hawl lagu tijaabiyo transistor -ka. Qaar badan oo multimeter -ka dhijitaalka ah ee maanta jira ayaa leh astaantan, xitaa kuwa raqiiska ah. Waxaad ku cabiri kartaa NPN ama PNP transistors laba -cirifoodka si loo go'aamiyo inay cillad leeyihiin.
Hadday taasi tahay kiiskaaga, waa inaad gelisaa kaliya saddexda biin ee transistor -ka godka multimeter -ka ee loo tilmaamay, oo ku meelee xulista booska hFE si loo qiyaaso faa'iidada. Markaa waad heli kartaa akhrin oo hubi xaashida xogta haddii ay u dhigantaa waxa ay tahay inay bixiso.
Tallaabooyinka lagu hubiyo transistor -ka laba -cirifoodka
Nasiib darrose, maahan multimeter oo dhan ayaa leh astaamahaas fudud, iyo u tijaabi si ka badan gacanta oo leh multimeter kasta waa inaad si ka duwan u samaysaa, adiga oo adeegsanaya tijaabada «Diode».
Waxa ugu horreeya ayaa ah in laga saaro transistor -ka wareegga si loo helo akhris wanaagsan. Haddii ay tahay qayb aan weli la iibin, waad badbaadin kartaa tallaabadan.
Imtixaanka Saldhig u ah Bixiyaha:
Ku xir hogaaminta togan (casaan) ee multimeter -ka salka (B) ee transistor -ka, iyo kan taban (madow) u horseeda emitter (E) transistor -ka.
Haddii uu yahay transistor -ka NPN oo xaaladdiisu wanaagsan tahay, mitirku waa inuu muujiyaa hoos u dhaca danab inta u dhaxaysa 0.45V iyo 0.9V.
Haddii ay noqoto PNP, xarfaha xarafka OL (In ka badan Xadid) waa in lagu arkaa shaashadda.
Imtixaanka Saldhig u ah Ururiyaha:
Ku xiro hogaanka togan min multimeter ilaa salka (B), iyo hogaaminta taban ee aruuriyaha (C) ee transistor -ka.
Haddii ay tahay NPN oo xaalad fiican ku jirta, waxay muujin doontaa hoos u dhac danab oo u dhexeeya 0.45v iyo 0.9V.
Haddii ay noqoto PNP, markaa OL ayaa mar kale soo muuqan doonta.
Imtixaanka Bixiyaha Saldhigga:
Ku xir siligga togan emitter (E) iyo siligga taban saldhigga (B).
Haddii ay tahay NPN oo ku jirta xaalad kaamil ah waxay tusi doontaa OL markan.
Xaaladda PNP, dhibic ah 0.45v iyo 0.9V ayaa la muujin doonaa.
Imtixaanka Ururiyaha Saldhigga:
Ku xiro togan multimeter -ka kuwa wax aruuriya (C) iyo tabaneyaasha saldhigga (B) ee transistor -ka.
Haddii ay tahay NPN, waa inay ka muuqataa shaashadda OL si loo muujiyo inay hagaagsan tahay.
Haddii ay dhacdo PNP, dhibicdu waa inay mar kale noqotaa 0.45V iyo 0.9V haddii ay hagaagto.
Imtixaanka Ururiyaha Emitter:
Ku xir siligga gaduudka aruuriyaha (C) iyo siligga madow ee emitter (E).
Hadday tahay NPN ama PNP xaalad fiican, waxay ku muujin lahayd OL shaashadda.
Haddii aad dib u rogto fiilooyinka, togan ee emitterka iyo taban ee aruuriyaha, labadaba PNP iyo NPN, waa inay sidoo kale akhridaa OL.
Mid kasta cabbir kala duwan taas, haddii si sax ah loo sameeyo, waxay tilmaamaysaa in transistorku xun yahay. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa wax kale, taasina waa in tijaabooyinkan lagu ogaanayo oo kaliya haddii transistor -ku leeyahay wareeg gaaban ama ay furan yihiin, laakiin aysan ahayn dhibaatooyin kale. Sidaa darteed, xitaa haddii ay dhaafto, transistor -ku waxaa laga yaabaa inuu qabo dhibaato kale oo ka horjoogsata hawlgalkeeda saxda ah.
Transistor -ka FET
Xaaladda noqoshada a Transistor -ka FET, oo aan ahayn mid laba -cirifoodka ah, markaa waa inaad raacdaa tillaabooyinkan kale oo leh multimeter -ka dhijitaalka ah ama analogga ah:
Ku rid multimeterkaaga shaqada tijaabada diode -ga, sidii hore. Ka dibna ku dheji baaritaanka madow (-) boosteejada Dheecaan, iyo baaritaanka cas (+) ee ku yaal terminaalka Isha. Natiijadu waa inay noqotaa akhrinta 513mv ama wax la mid ah, iyadoo ku xiran nooca FET. Haddii aan akhriska la helin, wuu furnaan doonaa haddii uu aad u hooseeyana waa la gaabin doonaa.
Adiga oo aan ka bixin caarada madow godka godka, ku rid caarada gaduudka meesha Gate -ka. Hadda imtixaanku waa inuusan soo celin wax akhris ah. Haddii ay muujiso wax natiijo ah shaashadda, markaa waxaa jiri doona dillaac ama wareeg gaaban.
Ku rid caarada ilaha, kan madowna wuxuu ku sii jiri doonaa godka. Tani waxay tijaabin doontaa isgoyska Dheecaan-Ilaha iyada oo la kiciyo oo la helo akhris hoose oo qiyaastii ah 0.82v. Si loo damiyo transistor-ka, saddexda xarumood ee ay leedahay (DGS) waa inay noqdaan kuwo gaaban, waxayna ka soo laaban doontaa dawlad-goboleedkii oo waxay ku noqon doontaa dawladda aan shaqayn.
Tan, waxaad ku tijaabin kartaa transistors-ka nooca FET, sida MOSFETs. Xusuusnow inaad leedahay sifooyin farsamo ama waraaqaha macluumaadka kuwaan si aad u ogaato haddii qiimayaasha aad heshaa ay ku filan yihiin, maadaama ay ku kala duwan tahay nooca transistor -ka ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Hubinta transistor: talaabo talaabo lagu sharaxay